I-Apollo Studio - I-Airbnb
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Νικόλαος
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Aga 3.
Amakamelo e-Oasis atholakala edolobhaneni elihle laseKardakata. Iphuzu lesu eliseduze kakhulu nazo zonke izindawo ezikhangayo zase-Kefalonia-elilungele ukuvakasha kwesiqhingi.
Ibhishi leMyrtos elidumile emhlabeni liyi-15 'drive ukusuka kithi.
I-Agia kiriaki, 9 ', i-jem yangempela efihliwe lapho ungavakashela khona amabhishi angenalutho ngesikebhe. Ibhishi lasePetani, 18 ', linokubuka kokushona kwelanga okumangalisayo.Zombili izinhliziyo zesiqhingi i-Argostoli ne-Lixouri ziqhele ngamaminithi angu-20'. Ivuliwe kusukela ngo-2016, siyajabula ukuba yingxenye yolwazi lwakho.
Amakamelo aqashisayo e-Oasis atholakala edolobhaneni elihle laseKardakata engxenyeni esentshonalanga yesiqhingi. Ibhizinisi elincane lomndeni eliphethwe u-Nikos, umnikazi wendlu, onomoya wokungenisa izihambi, onobungane futhi okhulumisanayo.
I-Studio Apollo isitezi sokuqala sendlu. Lesi situdiyo sinemibhede emibili eyodwa, i-TV yahlala, ifriji kanye netafula lokudlela, i-air-conditioning ne-WiFi yamahhala. Izinsiza ezijwayelekile zale ndawo zihlanganisa i-swimming pool, indawo yokubhukuda, ama-sunbeds kanye nezambulela.
Intengo yokuqasha ihlanganisa ukunikezwa kwesidlo sasekuseni ngaphakathi kwegumbi. Igumbi lakho lizolungiselelwa wena lapho ufika nokugeza okusha namathawula ezandla futhi imibhede izokwendlulwa. Amathawula asendlini nelineni lombhede azoshintshwa njalo ezinsukwini ezi-3 - 4. Intengo ihlanganisa nokuhlanza ukukhanya nsuku zonke.
Amabhishi aseduze yi-Agia Kyriaki (9 'drive) kanye neMyrtos (15' drive). Inhloko-dolobha yesiqhingi, i-Argostoli, iyibanga elingu-19km (20 ’drive).
ubusuku obungu-7 e- Kardakata
Aug 4, 2022 - Aug 11, 2022
4.77 · 13 okushiwo abanye
Azikho izinto zokuhamba zomphakathi ezisuka esikhumulweni sezindiza noma inhloko-dolobha ukuya edolobhaneni laseKardakata. Kuzodingeka imoto noma isikuta ukuze uvakashele izindawo ezikhangayo zesiqhingi, izindawo zokudlela zasendaweni kanye nemakethe encane eseduze (6 'shayela uye edolobhaneni eliseduze lase-Agonas). Izindawo zokudlela eziseduze ezinikeza ukudla kwasendaweni nezitsha zezinhlanzi zikude nemizuzu emi-4 'kuya kwengama-7' ukushayela.
Ogwini lolwandle lwase-Agia Kyriaki, ungakwazi futhi ukujabulela ukugibela izikebhe, ukuvakasha kokudoba kanye nama-cocktails, ubhiya obandayo nezinye iziphuzo kuma-beach bar ama-2.
UNikos, umnikazi womuzi, uzotholakala lapho efika.
Inombolo yepholisi: 0830K112K0225000
Hlola ezinye izinketho ezise- Kardakata namaphethelo